Inhloko ZeNdaba Mpalakazi 25, 2020
I Covid 19, ibulele abantu abathobamunwemunye-9 izolo, eZimbabwe osokukhuphule inani lasebebulewe yiyo kwabangamakhulu edlula amathathu-339. Sebezinkulungwane ezedlula ezilitshumi lanye-12,786, asebehlolwe bafunyanwa belegcikwane leli lokhu laqala ukuhlasela elizweni. Abasinde kulumkhuhlane, sebezinkulungwane ezedlula ezilitshumi-10,314.
Intathelizindaba ebilodumo, ebigxile ekuthapheni izindaba zemidlalo, uTendai Ndemera, obhubhe ngoLwesithathu, ungcwatshiwe namhlanje emathuneni aweZororo Memorial Park, eHarare.
Lamhlanje bekuyiKhisimusi emunyu kakhulu kunkulungwane lenkulungwane zezizalwane zeZimbabwe ebezivalelwe emngceleni weBeitbridge zizama ukuchapha ukuba ziyekudla ikhisimusi lezihlobo labangane ekhaya. Lobanje abanengi beze bachapha umngcele, iKhisimusi iqale belokhu bengakafiki emakhaya.
KuWoza Friday liviki sileqembu elucula ingoma zokholo liko Bulawayo ele Original Messiah Choir. Njengoba kuyiKhisimusi kunje nje sicabange ukulilibazisa ngomculo othoba inhliziyo, sikhumbula ukuthi sinanza ukuzalwa komsindisi wethu.
Ku Livetalk namhlanje sikhangela ukuthi liyidlale njani iKhisimusi yalonyaka phakathi kobhubhano lweCoronavirus oluhlasele umhlaba jikelele okugoqela eleZimbabwe.